विरासतबाट साझा उम्मेदवार कति सम्भव ?
आश्विन १२, २०७८ कलेन्द्र सेजुवाल
काठमाडौँ — कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले असार ७ मा महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र नेता प्रकाशमान सिंहलाई आफ्नो निवासमा बोलाएर ‘लन्च मिटिङ’ गरे । पार्टीका संस्थापक नेतात्रय बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह र महेन्द्रनारायण निधिका छोराबीच भएको बैठकले कांग्रेसमा १४ औं महाधिवेशनको सरगर्मी बढायो । नयाँ नेतृत्वका लागि सहमति गर्दै साझा उम्मेदवार तय गर्ने सन्देशले कांग्रेस थप तरंगित छ ।
नेतापुत्रहरूको यो प्रयास सार्थक होला त ? भदौ १८ देखि महाधिवेशन प्रक्रियामा होमिइसकेको कांग्रेसमा विभिन्न कोणबाट यसबारे अड्कल गर्न थालिएको छ ।
उनीहरूबीच शुक्रबार कोइराला निवासमा पाँचौं बैठक बस्यो । तर तीन महिनामा तीनै जनाको नेतृत्वको महत्त्वाकांक्षा निकै चुलिएको छ । उपसभापति निधिले भदौ ११ मा नयाँबानेश्वरमा सम्पर्क कार्यालय खोलेर सभापतिको दौड सुरु गरिसकेका छन् । उक्त घोषणासँगै निधिले सभापति शेरबहादुर देउवाको साथ छाडेका छन् । कोइराला र सिंह पनि आफ्नो समूहभित्र सभापतिको एकल उम्मेदवार बन्ने होडमा छन् । नेतापुत्रबीच साझा उम्मेदवार तय गर्ने प्रयासको सबैभन्दा प्रमुख चुनौती भनेकै स्वार्थको बिन्दु एउटै (सभापति पद) हुनु हो । राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल पारिवारिक विरासतले ३ जनालाई एक ठाउँ बसेर छलफल गर्ने अवस्थामा पुर्‍याए पनि एकले अर्कोलाई नेता (सभापति) मान्न सक्ने अवस्था सहज देख्दैनन् । ‘राजनीतिमा दुई जनाभन्दा कनिष्ठ भए पनि बीपीको छोरा हुनुको नाताले शशांकको दाबेदारी बलियो हुने नै भयो,’ उनले भने, ‘सिंह र निधिले पनि आफूलाई केन्द्रमा राखेर आफूअनुकूल वातावरण बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।’
कांग्रेसको राजनीतिमा पारिवारिक लिगेसीले ठूलो अर्थ राख्ने गर्छ । बरालको भनाइमा शशांकले १३ औं महाधिवेशनमा थुप्रै सिनियरलाई पछाडि पार्दै महामन्त्री हुने अवसर बीपीपुत्र भएकैले पाएका हुन् । निधि र सिंहको राजनीतिक जीवनमा पनि पिताको विरासत जोडिने गर्छ । १२ औं महाधिवेशनमा सभापतिका उम्मेदवारद्वय सुशील कोइरालाले सिंहलाई र शेरबहादुर देउवाले निधिलाई महामन्त्रीको उम्मेदवार बनाएका थिए । यसको प्रमुख उद्देश्य संस्थापक नेताद्वय (गणेशमान–महेन्द्रनारायण) को विरासतको लाभ लिनु थियो । उक्त महाधिवेशनमा सिंह निर्वाचित भएका थिए । ‘दुवै नेता (निधि र सिंह) ले पार्टीमा सभापति बन्न आवश्यक योगदान दिएका छन्, उचाइ बनाइसकेका छन्,’ बरालले भने, ‘यस्तो अवस्थामा एकले अर्कोलाई कसरी सहजै छोड्लान् र ?’
संस्थापक नेतापुत्रबीच साझा उम्मेदवारी प्रयासको अर्को जटिलता हो, कोइराला र सिंहको समूहमा एकल उम्मेदवारीका लागि बढ्दो दबाब । निधिले देउवाबाट अलग्गिएर उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका भए पनि कोइराला र सिंह वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहमै छन् । उक्त समूहमा पौडेल स्वयं र शेखर कोइराला पनि सभापतिका आकांक्षी छन् । पार्टीमा देउवापछि शीर्ष स्थानमा भए पनि पौडेलले सभापति र प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका छैनन् । त्यसैगरी १३ औं महाधिवेशनमा भाइ शशांकलाई महामन्त्रीमा सहयोग गरेका शेखरले त्यसलगत्तै सभापतिको दौड सुरु गरेका थिए । देउवाइतर समूहमा उमेरका कारण एकपटक पौडेललाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने वातावरण बन्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषक बराल बताउँछन् । यो अवस्थामा कोइराला (शशांक) र सिंहले पौडेललाई सहयोग गर्छन् कि निधिसँगको सहमतीय प्रयासलाई ठोस रूप दिन्छन्, त्यो अर्को रोचक बिन्दु हुनेछ ।
कांग्रेसमा कोइराला परिवार एक स्थायी र बलियो समूहको रूपमा स्थापित छ । अहिले उक्त समूहको प्रतिनिधित्व शशांकका साथै नोनापुत्र शेखर र गिरिजापुत्री सुजाताले गर्छन् । यस्तो अवस्थामा शशांकले एक्लै निधि–सिंहसँग बैठक गरेको शेखर–सुजातालाई पचेको छैन । नेतात्रयको साझा उम्मेदवारीमा कोइराला समूहका अन्य सदस्यको बाधा पनि चुनौतीका रूपमा रहेको छ । वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहाल भने कांग्रेस पार्टीभित्र हुर्किरहेको संस्थागत समूहवाद संस्कृतिको अन्त्यका लागि नेतात्रयले थालेको अभियान सार्थक हुने बताउँछन् । यसले साझा उम्मेदवार तय गर्नेभन्दा पनि सहमतिको प्रयासलाई बृहत् बनाई पार्टीलाई जोड्ने उनको भनाइ छ । ‘तीन जना नेताले एउटा फर्मुलाबाट सहमतिको प्रयास गरिरहनुभएको छ, उता (रामचन्द्र पौडेल समूहमा) पनि सहमतिका लागि केही फर्मुला त होला,’ उनले भने, ‘दुवैतिरको फर्मुला एक ठाउँमा राखेर सहमतिको मध्यबिन्दु बन्न सक्छ ।’ १४ औं महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर संस्थापक नेतापुत्रबीच छलफलको अग्रसरता निधिले गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय प्रचार विभागका सदस्य गोविन्द कोइराला पार्टी स्थापना र लोकतन्त्रका लागि योगदान गरेका नेताको विरासत बोकेका नेतात्रयबीच सहमतिको प्रयास हुनु राम्रो भएको बताउँछन् । ‘उतिबेला बीपी, गणेशमान र महेन्द्रनारायणबीच अत्यन्तै सुमधुर सम्बन्ध थियो, तर तीन नेताका छोराबीच एक किसिमको प्रतिस्पर्धा चल्यो,’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिमा स्थायी शत्रु भन्ने हुँदैन, एजेन्डाले एक ठाउँ पुर्‍यायो भने सहमति र साझा उम्मेदवारी असम्भव पनि देखिँदैन ।’
प्रकाशित : आश्विन १२, २०७८ ०७:५७